လက်ရှိအချိန်မှာ, အများစုမှာဟိုတယ်ပရိဘောဂစိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂဖြစ်ပါတယ်. တရုတ်၌, ပရိဘောဂအပြင်အဆင်နှင့်နေရာချထားခြင်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်. Feng Shui ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်အကျိုးရှိသည်. ပရိဘောဂနေရာချထားမှုကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများအားလုံးကိုသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်၏နောက်သို့လိုက်ပါ.
In the furnishings of the hotel, အိပ်ရာ၏အနေအထားအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. အိပ်ယာတောင်မှဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်. အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပြီးအိတ်ကိုချပြီးနောက်, အာရုံစူးစိုက်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအရာဝတ္ထုပထမ ဦး ဆုံးအများအပြားခရီးသွားများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဆွဲစေခြင်းငှါအိပ်ရာဖြစ်ပါတယ်. ဟိုတယ်ပရိဘောဂတွင်အိပ်ရာထားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများစွာရှိသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အိပ်ရာ၏အနေအထားအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှတံခါးကိုဆန့်ကျင်ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်. တရုတ် Feng Shui အဆိုအရ, ပရိဘောဂနှင့်တံခါးခြံများသည်ကံမကောင်းပါ. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကြေးမုံအသုံးပြုမှုသည်ဟိုတယ်ပရိဘောဂများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. Feng Shui ၏သဘောသဘာဝငါးခု၏သဘောသဘာဝအရ, မှန်သည်ပျက်စီးလွယ်သည်, ဒါကြောင့်နေရာချထားနေစဉ်အတွင်းအိပ်ရာမရင်ဆိုင်ရပါဘူး, အထူးသဖြင့်မှန်မှအလင်းသည်ညအချိန်တွင်အိပ်ရာပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအခါ, ၎င်းသည်အနားယူရန်အထောက်အကူမပြုပါ.
ဒုတိယ, the placement of the sofa
In the rest process, ဆိုဖာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည်, နှင့်ဆိုဖာဟိုတယ်ကြွင်းသောအရာအရည်အသွေး၏စံဖြစ်ပါတယ်. The navy blue corner sofa hair placement is also very particular, ဆိုဖာ၏အထူးသဖြင့်အနေအထား. အသုံးပြုခြင်းကာလအတွင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်ဆိုဖာကိုထားသောအခါဟိုတယ်သည်နောက်ကျောကိုမှီခိုသင့်သည်. တိုက်ရိုက်အလင်းအောက်တွင်ဆိုဖာနေရာချထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, မဟုတ်ရင်, ၎င်းသည်လူကိုမူးဝြေခင်းနှင့်အနားမယူရန်ဖြစ်စေသည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အဆိုပါဆိုဖာအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှတံခါးဝမှာထားမရသင့်ပါတယ်. Fengshui တံခါးအပြင်ဘက်တွင်လေစီးဆင်းမှုပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်, which will haveabad influence on people's fortune.
The wardrobe isadecoration of hotel furniture, and also as an auxiliary object. တကယ်တော့, the placement of the wardrobe is also very particular. Many hotels will put the wardrobe close to the door when placing it. In addition to not targeting the door, the wardrobe needs to be placed against the wall. In Feng Shui Above, if the wardrobe is vacant, it means that the owner has no fixed place. The positional relationship between the closet and the wall is also very clever. There isacertain distance between the two types of furniture so that they will not interfere with each other and will be more convenient to use. You can also place some plants next to the closet to increase your fortune.
We are the ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ you have been looking for. Any interest pls check out the online store